Amakaag: Maroodi afka qiiq ka sii daynaya! – Madal Furan
Hoy > Warka > Amakaag: Maroodi afka qiiq ka sii daynaya!
Madal Furan – Muuqaal laga duubay maroodi ku nool dalka India oo muujinaya maroodigaas oo dambas afuufaya, oo la moodo in uu qiiq afka ka sii daynayo ayaa amakaag ku noqday khubarada aduunka ee daryeelka duur joogta.
Wuxu BBC-da u sheegay in uu muuqaalka imika uun faafiyey oo aanu hore “markii hore dhaadanayn muhiimadda uu leeyahay”.
Warbixinta ayaa waxa kale oo lagu sheegay in maroodiga muuqaalka laga duubay ayaa “la moodaa inuu dhuxul bakhtiday” oo halkii dabka lagu shiday lagaga tagay taallay cunay oo “dabeetana dambaskii dib u soo afuufaya”.
Waxaanu intaa ku daray “xaabada marka la shido dambaska dabka ka hadha waxa ku jira maado suntan la dagaalanta oo dawo ah, in kasta oo aanay wax nafaqo ah lahayn, hadana duur joogtu way jecel yihiin oo waxay ogyihiin in ay dawadaa ka helayaan oo way cunaan. Sidoo kale dambaska way ku xadhaadhaan, waana sababta ay dambaska gubadka u cunaan”.
Sawiro:- Muuse Biixi oo uusan ku farxin kala kulmay Raysal Wasaaraha Itoobiya
Akhri:-Digniin culus oo ka soo baxday madaxtooyada Galmudug ee Madaxweyne Xaaf.
Xisbiga midowga Nabadda ee Xasan Sheekh hogaamiyo oo War kasoo saaray Xaraashka Shidaalka